कपाल झर्ने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? मात्र यी ४ उपायबाट पाउनुहोस् छुटका’रा – paradeskhabar.com
September 21, 2021 904
क’पाल झर्ने स’मस्याबाट धेरै मानिसहरु चिन्तित हुन्छन् । विभिन्न कारणले क’पाल झर्ने स’मस्या पैदा हुन्छ । तर, गम्भीर रो’गका कारण क’पाल झर्ने स’मस्यामा बाहेक घरेलु विधि अपनाएर यसको स’माधान गर्न सकिन्छ ।
अमलाको जुस: अमलामा ट्यानिन र क्या’ल्शियम जस्ता पदार्थ पाइन्छ । यो दुवै पदार्थ कपाल बढ्न मद्दतगार हुन्छ । र यो क’पालको लागि निकै लाभदायक हुन्छ । कपालको जरामा अमलाको रस लगाउनुस् र ३० मिनेटसम्म लगाउनुस् । यो प्रक्रिया हप्तामा दुईपटक लगाउनुस् ।
प्याजको रस: प्याजको रसले क’पालमा यसको वृद्धिका लागि अतिरिक्त सल्फर प्रदान गर्छ । जसले गर्दा कपाल झर्न रोक्ने काम गर्छ । आधा प्याजको रस निकाल्ने र कपालको जरामा लगाएको ३० देखि ६० मिनेटमा पखाल्ने गर्नुपर्छ । यो प्रक्रिया हप्तामा दुई पटक गर्दा क’पाल झर्ने स’मस्यामा कमि आउँछ ।
मेथी हेयर मास्क: मेथीको दानामा प्रोटिन र निकोटिनिक एसिडको मात्रा उच्च मात्रामा पाइन्छ । यसले क’पाल झर्न र रुखो हुनबाट बचाउँछ । आधा कप मेथीको दाना रातभर भिजाउने र पेस्ट बनाएर कपालको जरामा लगाउने गर्नुपर्छ । मेथीको पेस्ट लगाएको ३० देखि ६० मिनेटमा पखाल्नुपर्छ । यो प्रक्रिया हप्तामा एकपटक लगाउनुपर्छ । नरिवलको तेल: नरिवलको तेल कपालको वृद्धि विकासमा निकै फाइदाजनक हुन्छ । हप्तामा दुई पटक नरिवलको तेलले मालिस गर्ने गर्नुपर्छ जसले कपाल मजबुत बनाउँछ । याे पनि पढ्नुहाेस् !
जवानीमै कपाल फुलेका कारण ल’ज्जित हुनुप’र्यो ? यसरी बनाउनुहो’स् प्राकृतिक रुपमै कालो कपा’ल: क’पाल मानिसको सौन्दर्यतासँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले मानिसको हेयर स्टाइलले पनि मानिसको सौन्दर्यमा निकै प्रभाव पार्दछ ।
तर समय नपुगि कपाल फुल्ने स’स्याबाट धेरैलाई सताएको हुन्छ । राति ढिलो समयसम्म नसुत्ने , खानपानमा ध्यान नदिने र धेरै तनाव लिने स’मस्याका कारण आजभोलि जवानीमै मानिसहरुको कपाल फुल्ने गरेको पाइन्छ । आज हामी कपाल फुल्ने समस्याबाट छुटकारा पाउने उपायका बारेमा जानकारी दिदैछौँ ।
कपाल फुल्न नदिन अप्नाउनुहोस् यी उपाय: १) अमला पिसेर लगाउने अमला पिसेर रातभर भिजाइ राख्ने अनि बिहान उठेर लगाउने गर्दा कपाल फुल्न बन्द हुन्छ । यसलाई निरन्तर प्रयोग गरिरहेमा कपाललाई सेतो हुन बाट जोगाउन सकिन्छ । २) कालो तिल कालो तिललाई केही समय पानीमा भिजाइदिने अनि लगाउने हो भने यसले बढ्दो उमेरमा तपाईको कपाल सेतो हुनबाट बचाउँछ । ३) काँचो मेवा काँचो मेवा पिसेर लगाउने गरेमा कपाल कालो भइरहन्छ । ४) नरिवलको तेल नरिवलको तेलमा अमला मिसाएर लगाउने गरेमा पनि कपाल चमकदार र स्व’स्थ हुन्छ । यसको नियमित प्रयोगले कपाल कालो हुन्छ ।
फाटेको भए घरमै उपचार: फाटेको क’पाललाई फेरि जोड्न सकिँदैन । तर, च्यातिएर फिँजारिँदा नराम्रो देखिएको कपाललाई घरमै प्याक प्रयोग गरेर मुलायम बनाउन सकिन्छ। फाटेको कपाल त बिस्तारै ट्रिम गर्दै गएर हटाउने हो । अनि नयाँ कपाल फाट्न नदिन सजग रहने हो । फाटेको कपालका लागि स्याम्पुमा अन्डा र पानी मिसाएर बनाएको प्याक ३०/४५ मिनेटसम्म कपालमा लगाएर त्यसपछि सादा पानीले पखाल्न सकिन्छ । यो उपाय हप्तामा एकपटक अपनाउँदा केही हप्तामै सकारात्मक प्रभाव देखिन्छ ।
Prevओली मलामी जाँदा पनि बाजा बजाउँदै नाच्दै हिँड्छन् : प्रचण्ड